Hayad cusub ayaa ka hortagaysa denbiyadda sharaf dhowrka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nolosha hablaha ayaa dun ka raaracda. sawir: Alice Petrén/veriges Radio.
Hayad cusub ayaa ka hortagaysa denbiyadda sharaf dhowrka
Haayad dawli ah oo cusub oo lag furidoono kowda bisha jeenaweri.
La daabacay torsdag 28 december 2017 kl 10.06
Hayadda cusub oo dawli ah oo ka hortagaysa tacadiyada dumarka lagula kaco ayaa koowda bisha jeenaweri ka howl bilaabi doonta Sweden.
Haayaddan ayaa shaqadeeda ugu weeyn noqon doontaa ka hortaga xadgudubyada sharaf dhowrka la xidhiidha ee dumarka lagula kaco. Wasiirada arimaha sinaanta ee Sweden Åsa Rognér ayaa sheegtay in haayaddan meel ku midayn doonto dhamaan ururrada ka hortaga cadaadiska la xidhiidha sharaf dhowrka.
Gacan ka hadalka iyo denbiyada sharaf dhowrka ku lugta leh waa dhibaatooyin aad u waaweeyn oo Sweden ka jira. Waxaanay burburinayaan durmarka iyo caruurta noloshooda. Inkasta oo la sameeyey shaqooyin wanaagsan hadana laguma guulaysan in la dhimo heerka dilalka.
Haayadda oo ay ka howlgeli doonaan 70 shaqaale ah ayaa lagu wargeliyey in ay fuliso mashruucyo ku wajahan wiilasha iyo raga oo lagu joojinayo denbiyada shaaraf dhowrka. Dhinaca kale haayaddan waxa kale oo ay u xilsaaran tahay in ay ka shaqeeyso joojinta xadgudubyada dumarka lagula kaco ee ka dhaca shaqooyinka, iyo sidoo kale ka ganacsiga dadka iyo faafinta sawirada muujinaya jidhka caruur qaawan.
Dhinaca kale mucaaridka qaar ayaa hore u muujiyey walaac ay ka qabaan haayaddan, iyaga oo sheegay in haayaddan burburin doonto aqoontii hore ee looga lahaa denbiyadda sharaf dhowrka. Hayeeshee Åsa Rognér ayaa iska fogaysay daliilahan.
-Majirto wax aan burburinayno, anagu waayo-aragnimadii hore u jirtay ayaan wax ku dhisaynaa. Waana howsha haayaddan in ay la shaqeeyso dadkii hore u lahaa aqoon oo arrintan badan oo ku saabsan.
Hayadda ayay xarunteedu noqon doontaa xaafadda Angered oo dhacda waqooyi-bari ee magaalada Göteborg.